Njem Nlegharị Anya na St.Lucia: Dr. Peter Tarlow nwere mmetụta nke ọkaibe
Location: Mbido » Ịdee » Na-agbasa News Travel » Njem Nlegharị Anya na St.Lucia: Dr. Peter Tarlow nwere mmetụta nke ọkaibe
Nwere ike 12, 2019
Nchebe na njem bụ isi ihe na-aga nke ọma. Ebe dị ka Saint Lucia na Caribbean maara nke a na ndị nketa oke rutere mgbakwunye eTN safertourism.com ime nyocha nke mbu banyere onodu nchekwa na nchekwa nke obodo ndi njem na njem. Safertourism.com bụ a nkwonkwo mmekorita n'etiti Ụlọ ọrụ eTNn na Tourism na More n'okpuru nduzi nke Dr. Peter Tarlow.
A na-ewere Dr. Peter Tarlow dị ka onye ọkachamara na-ahụ maka nchekwa njem nleta. Ọ bịarutere na Saint Lucia ụnyaahụ ka inyocha wee nyochaa etu Saint Lucia si dị mma maka ndị ọbịa.
A na-ahụta Saint Lucis dị ka ebe dị mma site na Ngalaba US State, Canada, na Mba Europe, mana Muggings emeela na mpaghara ndị njem nleta na obere mpụ na-agakarị, dị ka ịpị ego na ịpụn obere akpa, na-eme ma na-abawanye na ịbịakwute ememme ndị a na-eme kwa afọ, dị ka:
na jazz ememme na May
emume carnival na July
oge ezumike oge oyi.
Saint Lucia bụ mba agwaetiti Caribbean nke nwere ọmarịcha ugwu, Pitons, n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ ya. Coastsọ osimiri ya bụ ebe e nwere ugwu ndị na-agbọpụ ọkụ, ebe ndị a na-egwu mmiri, ebe ndị a na-eme okomoko, na obodo ịkụ azụ. Zọ ụkwụ dị n’ime mmiri ozuzo dị n’ime mmiri na-eduga na nsụda mmiri dị ka Toraille 15m-elu, nke na-asọba n’elu ugwu n’elu ogige. Isi obodo, Castries, bụ ọdụ ụgbọ mmiri na-ewu ewu.
Dr. Tarlow na-akọ site na St. Lucia: “Taa bụ ụbọchị mbụ anyị n'ezie na St Lucia. Obi abụọ adịghị ya na agwaetiti a mara mma. Ọ bụ ala jupụtara na oke ohia, ebe okooko osisi jupụtara, jupụtara na ugwu ndị yiri ka ha na-asọ n'oké osimiri, ma n'otu oge ahụ metụrụ eluigwe. Ala ahụ na-echetara onye na-ekiri ngwakọta nke oke ọhịa Brazil nke a setịpụrụ na oke ikuku nke Hawaii. Ọtụtụ n'ime ọdụ mmiri ndị dị n'ụsọ oké osimiri jupụtara na yachts dị ebube, ala ndị ahụ jupụtara na millionaires. Aga m akpọ ụlọ nkwari akụ anyị ebe "mara jụụ". N'adịghị ka ọtụtụ ebe ndị Caribbean
ation Centres, enwere echiche dị omimi ebe a, ebe ụmụ nnụnụ na-ebe akwa megide akwa nke ákwà ọcha, ala nke egwu oge gboo na jazz
Taa, m gara ọtụtụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụsọ mmiri, na ebe a na-ekwo mmiri. Obi ụtọ nke ọchị mụ na ndị ọrụ njem njem dị njikere ime ihe n'eziokwu na nghọta. Dịka na mba ọhụụ ọ bụla na-achọ ụzọ ya n'ụwa, enwere esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, eziokwu bụ na ọgwụ na-elekọta mmadụ na-eme ka mba kwụsị, na n'ikpeazụ, ọ bụ ndị ogbenye na-akwụ ụgwọ ahụ, na nghọta nke ezinụlọ na-enweghị nna na-emepụta ndị na-enweghị obi ụtọ. Ihe esemokwu ndị a abụghị naanị na St. Lucia; ha bụ ihe zuru ụwa ọnụ. Agbanyeghị St Lucia pere mpe, onye ọ bụla nwere ike ịmara onye ọ bụla ọzọ, yabụ nnukwu nsogbu yiri ka ibu ebe a.
N'agbanyeghị nsogbu ndị a niile, St Lucia nwere ike ime njem. Ihu igwe ya na-ekpo ọkụ dị ka ndị ya, ọdịdị ala ya na-abanye n'oké osimiri na-enwu gbaa, ọdịdị ya dị iche na nke ọzara-dị ka nke oke ọhịa mmiri, na nri ya na-agwakọta ndị kacha mma nke Caribbean. Ebumnuche mgbe ahụ ga-abụ ịgbanwe nsogbu ya gaa na ngọzi zuru ụwa ọnụ maka ma ndị ọbịa ma ụmụ amaala ya. Ọ dịghị ọrụ dị mfe, mana agha bara uru ịlụ ọgụ.
Motherbọchị ndị Nne Obi ụtọ na St. Lucia. Echi, m ga-aga n'ihu na njem m na-ege ntị.
Caribbean Corporation Peter Tarlow Tourism
Airbus mbụ na Amerika: Azul A330neo
Ndị njem njem nlegharị anya nke Africa nke Media Network ugbu a na mba 28
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Ego njem azụmahịa ga-adaba $20 ijeri ...
Fraport: njem Ista na-enye ọnụọgụ ndị njem ...
Uganda kwụsịrị ikike ịnwale PCR maka ndị niile gbara ọgwụ mgbochi…
Hotel Arts Barcelona na-ekpughere oge okpomọkụ na Marina ọhụrụ…
Ndị na-eto eto Russia na-emegide mbuso agha nke Ukraine
Ụgbọ elu Alaska kpọpụtara onye ọrụ ụlọ ọrụ afọ 30 ọhụrụ…
Ahịa Potassium Sulfate iji rute ọnụ ahịa…
Ndị na-eme njem nlegharị anya India wepụtala atụmatụ maka mweghachi njem nlegharị anya
Network Tourism Network na-eru uju maka mfu nke Kenya mbụ…
Ọgwụgwọ ọsụ ụzọ nke ọrịa na-ebute ọtụtụ mmadụ ...
Zanzibar na-anabata ndị njem nlegharị anya nke Ukraine
Ndokwa ụgbọ elu na-egosi oke okpomọkụ nke njem